OMN: Haala yeroo iratti turtii Dr. Mararaa Guddinaa Waliin (Amajjii 09, 2019) | Kichuu
HAMMAA AMMATI NAMOONI MOTUMMAA BULCHISAA ABIYYI AHMED UKKAMSEE NAMA 1579 .RAJII!! Amajji 09,2019] Harmeen Caaltuu Taakkalaa maal jedhu?
“Waraana Liyyuu Ayilii Oromiyaatu ganama sa’a 12 irratti nutti seenee mana nutti rukute. Yeroo sanatti akkuman ta’eyyuu hinbeeku gaggabeen lafatti kufe. Waanan qabadhus dhabeen dacheetti lafa dhahe. Achitti bishaan natti naqani. Isaanuma (warra Caaltuu qabuu dhufe) keessaa tokkommoo na sossobee gaaffii wayii gaafannee deebifna naan jedhee na sossobe. Yeros lakkisanii guyyaa sa’a 8 boodammoo ammas manatti marsanii fudhatan….”
“Ani waanuman jedhu hinqabu, ijoolleen kun anaan ala Abbaa hinqaban, anammoo waan isaan natti deddeebi’anii qofaa na hanbisuu barbaadaniif hinbeeku…” Jechuudhaan boo’aa miira gaddaan Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo dubbisan Harmeen Caaltuu Taakkalaa.
Qophii keenya har’aan guutummaasaa dhaggeeffattu!
Amajji 09,2019] #Hidhaan uummata Oromoo irratti jabaatee itti fufe. Bulee Horaa keessattis Oromootni hedduun hidhamaa jiru.
1. Gololcha Goobanaa
2. Duubaa Yaachis
3. Turee Xissoo
4. Duubee Xissoo fi
5. Dejenee Qilxaa Goloo
Suuraa namoota sadii argannullee ka lamaa ammaaf hinarganne.
SHIRA #ODP ILAALA
Amajji 8/2019 dhaamsa gola tikaa federaalaa keessaa baate
” Elaa yaa qomoo koo miseensa tikaa mootummaa EPRDF keessaa hojjedhus Ummanni Oromoo miidhamuu mitii gaaddiidduun lammii koo irra ejjetamuu hin fedhu. Nan sobaa fi dhugaa odeessa ani siif kennummoo iccitiima ani kanaan dura siif kennurraa tilmaamuu dandeessa. Ummanni Tigiraayi maaliif RIBtti daandii cufe beektaa? Odeeffannoo mootummaan karoorsee hojiitti hiikuuf jedhu argatan innis;-
1=Mootummaan RIB daangaa Ertiraa irraa kaasuun isaa saba qaba innis Mootummaan Ertiraa Baadimmee,shiraaroo fi kkf Mootummaa naannoo tigiraayi rukkuchiisee akka fudhatan waliif gale. Gabaabumatti Ertiraan akka tigiraayin rukuttuu fi RIB akka qooda keessatti hin fudhanne waliif galan.
2=Amaarrimmoo Walloo, Raayyaa fi kkkf rukuttee akka humnaan fudhattuuf mootummaa naannoo Amaaraa waliin waliif galan akkasumas magaalaan finfinnee dantaa Amaaraa fi Oromoof qixxee akka qooddatan waliif galan kunis kan hojiitti hiikamu WBO dhiha Oromiyaa,jiddu gala, baalee,gujii fi boorana keessaa erga dhabamsiifamee booda jedha waliif galteen kun kanaaf hanga waraanni ABO badutti nageenya walii eegna, waldeggerra,waltumsina kallattii hundaan jedhanii waliif galan.
3=RIBn mootummaa naannoo Amaaraa fi Tigiraayi keessaa gara Oromiyaatti guuramaa jira WBO balleessuuf waan ta’eef adaraa ummata koof naaf dhaami jiraatti gurguramaa jirra yaa qomoo koo”
By Solomomn Ungashe
Sababa sadiyiif ABOn Jaal Dawud Ibsaan hogganamu ABO jedhamee waamamuu qaba:
1- Dhaabichi maqaa kanaan of waama sababa ta’eefi. Qaama tokko maqaa inni ittiin of waamu dhiisanii kan biraa baasuufiin doofummaadha.
2- ABOn yeroo lammataaf bara 2001 keessa bakka lamatti cabe. An lameen keessaa isa tokko keessan ture. Qaama Cehumsa ABO jennee of waamne. Karoorri keenya walgayii Gumii Sabaa waamnee sagalee wayyabaan hoggansa Jaal Daawud jijjiiruu ture. Karoora keenya fiixaan baasuu sababa dadhabneef ABOn Jaal Daawudiin hogganamu ABO ta’ee itti fufe — Gumii Sabaatiin filatame sababa ta’eefi. Nutis ABO-QC taanee hafne.
3- Bara 2001 booda ABOn yeroo addaddaa caccabeera. Kanneen irraa caban hundi maqaa haaraa baafatan malee nutu ABO dha ofiin hin jenne. Fakkeenyaaf: ADO, ABO-Tokkoome, AWO, kkf. Yeroo sanas ABOn Jaal Daawudiin hogganamu ABO ta’ee itti fufe.
Qaamotni ABO irraa caccaban har’a maqaa dur ofiif baafatan gatanii nuti ABO dha ofiin jedhuu hin danda’ani. Maqaa jijjiirrachuu yoo barbaadan bataskaana Garbeelii deemanii kristinnaa ha ka’ani. Yeroo sana Welde-Abos jennee waamuunii dandeenya